Taariikhda My Butros » 10 Sababaha Maxaad Cats Ma Superior in ay saaxiibadood,
Last updated: Dec. 05 2019 | 2 min akhri
Ma waxaad qaadataa in marxalad in nolosha markii aad tixgelinayso feeri ah, purring Saaxiibkiis in lagugu haayo shirkadda? Ha ka xishoonayaan ma noqon; waxaa isku duubtid. Cats waa fantastic, oo ilaa iyo haatan lahaa waxaan u tegayaa inaan sheegayaan in xaalado badan, ay xitaa ka fiican yahay saaxiibka nahay. Sure, iyagu ma ay tahay u gudan karo alaabtii jirka (taas waa hubaal ma waxa aan uga jeedno Date My Butros), laakiin taasi waxa weeye waxa internet ah, Kaararka technology oo credit casriga ah waxaa loogu talagalay. Waxa ay qaban karaan waa siiyaan aad jeceshihiin, shirkadda iyo wax badan oo dhan, qoslo. Dadka ku Gannaa kartaa 'marwada cat waalan' ceebeynta ku wareegsan ay doonayaan dhan, laakiin waxaa jira sababo fiican oo hilariously guud si ay u doortaan bisad badan saaxiib.
1. Waxay Dhif Cayaarin Mark ah
Waad og tihiin in aan la hadlayo ku saabsan musqulaha halkan, Mudanayaal. Cats guud ahaan waa cajiib saxda ah marka ay timaado ujeedadooduna.
2. Waxay ku hay si fiican labisan
Cats dhab daryeeli ku saabsan muuqashadooda iyo iyaga qudhooduba sii raadinaya wanaagsan. Sure, qaar ka mid ah eyda lehba dheer u baahan tahay sida burushka dheeraad ah, laakiin ugu yaraan ay ku riyaaqaan.
3. Waxay tahay Maintenance Low
All bisadaha rabnaa Hurdadiina, cunto, gacal iyo kenaan. Waxaad haysan doontaa sidii aad u xalili xun ka qaban, dayacaad dareenka ama ka qabi karto galay TurtleMan, Qoyskii Gabbo ama wax kasta oo guys kale soo cabatay u muuqdaan in ay ku raaxaystaan ​​daawashada.
4. Way idiin qalbi qabowjin Marka aad jiran tahay
Cats waxay leeyihiin dareen lixaad marka ay timaado jirro, oo inta badan si gaar ah raaxo iyo jecel markii ay milkiilaha jiran yahay. This Juxtapose nin ku bahoobay ururka cad oo idinka mid ah si aanay qandaraas Man Flu oo aad ka arki kartaa sababta bisadaha yihiin doorashada ka xoogbadan,.
5. Waxay Waxaad diiran
Your cat wax uma xukumi doono ama jiid meel fog kaa sabab u icicles bahalnimada ah in aad wacdo suulasha. Waxay ku faraxsan ilaa snuggle iyo adiga iyo cagaha sitoos aad kulayl.
6. No In-Sharciyada
No waalan soddoh waa lagu daray wayn ee aan kitaabkayga.
7. Gacal iyo Kaliya gacal
photo by Emiliàn Robert Vicol cc
Waxay kama filayno wax ka badan ka massage ah. Ma og tahay waxaan ula jeednaa in, marwooyin.
8. Waxay Cidna ha xukumina caadda Eating
Samaynta fudud ku caweeynaya 1da ka soo baxay oo looska, chips shukulaatada iyo malqaacad? Cat A hoos u leh in ay noqon doonaan. Ma looks ku xukumayn ama tilmaamo unsubtle ku saabsan halkan xubin gym.
9. No Whiskers waaskada
Haa, lagusoo in ma dhici. Waxaad tahay qof soo dhaweyn.
10. Waxaad gali karto Records Medical
Taasi codadka creepy, oo aan gebi ahaan raaxo leh in ahay. Laakiin aad leedahay si aad u galiyo in ay raaxo u leh in la ogaado jirin arimo la yaab VD aad la feline saaxiib feeri.
7 RUNTA Fool saabsan Dating casriga ah